Imveliso yokuveliswa kwetywina yase China kunye nabenzi | Dingtaisheng
Ukuhanjiswa kokuhamba kwamanzi ngokufanayo:
Ngokutshintsha ulwalathiso lokuhamba kwamanzi kwisitya sokubuyisa, ukuhamba ngokufanayo kwamanzi kufezekiswa nakwesiphi na isikhundla kwicala elithe nkqo nelithe tye. Inkqubo efanelekileyo yokuhambisa amanzi embindini wetreyi nganye yemveliso ukufezekisa inzalo efanayo ngaphandle kokuphela.
Ubushushu High unyango ixesha elifutshane:
Ubushushu obuphezulu bokubulala inzalo kunokwenziwa ngokufudumeza amanzi ashushu kwitanki yamanzi ashushu kwangaphambili kunye nokufudumeza ukusuka kubushushu obuphezulu ukubulala iintsholongwane.
Ilungele izikhongozeli ezinokukhubazeka ngokulula:
Ngenxa yokuba amanzi enamanzi anokwenza umphumo omuhle wokukhusela kwisitya phantsi kobushushu obuphezulu.
Ukulungele ukuphatha ukutya okukhulu okusemathinini:
Kunzima ukufudumeza nokucoca inzalo kwindawo enkulu yokutya okunkonkxiweyo ngexeshana elifutshane ngokusebenzisa indlela yokubhala emileyo, ngakumbi ukutya okune-viscosity ephezulu.
Ngokujikeleza, ukutya okuphezulu kwe-viscosity kungafudunyezwa ngokulinganayo kwiziko ngexeshana elifutshane, kwaye kufezekiswe ukusebenza kokubulala inzala. Ukufudumeza kwamanzi kubushushu obuphezulu kukwadlala indima ekukhuseleni ukupakishwa kwemveliso ngexesha lokujikeleza.
Layisha ingobozi egcweleyo kwiRetort, uvale umnyango. Umnyango wokuvalela utshixiwe ngongenelelo kathathu lokhuseleko ukuqinisekisa ukhuseleko. Umnyango utshixiwe ngoomatshini kuyo yonke le nkqubo.
Inkqubo yokuvala inzala yenziwa ngokuzenzekelayo ngokuhambelana neresiphi yegalelo lolawulo lwe-PLC.
Ekuqaleni, amanzi anobushushu obuphezulu avela kwitanki lamanzi ashushu afakwa kwisitya se-retort. Emva kokuba amanzi ashushu exutywe nemveliso, ijikeleziswa ngokuqhubekayo ngempompo enkulu yokuhamba kwamanzi kunye nombhobho wokuhambisa amanzi ngokwesayensi. Umphunga utofelwe kumxube womphunga wamanzi ukwenza imveliso iqhubeke ukufudumeza nokucoca.
Isixhobo sokutshintsha kokuhamba kolwelo kwinqanawa yokubuyisa ifezekisa ukuhamba ngokufanayo nakwesiphi na isikhundla kwicala elithe nkqo nelithe tye ngokutshintsha indlela eya kuyo kwinqanawa, ukuze kufezekiswe ubushushu obugqwesileyo.
Kuyo yonke le nkqubo, uxinzelelo ngaphakathi kwenqanawa yokubuyisa lilawulwa yinkqubo yokufaka okanye ukukhupha umoya ngezivalo ezizenzekelayo. Kuba kukuntywilisela inzalo emanzini, uxinzelelo ngaphakathi kwenqanawa aluchaphazeleki bubushushu, kwaye uxinzelelo lunokusetwa ngokungqinelana nokupakishwa okungafaniyo kweemveliso ezahlukeneyo, okwenza ukuba inkqubo isebenze ngokubanzi, isiqwenga se-3, isiqwenga sesi-2, iipakeji eziguqukayo, iipakeji zeplastiki njl. ）.
Kwinyathelo lokupholisa, ukubuyisela amanzi ashushu kunye nokutshintsha kunokuchongwa ukubuyisela amanzi ashushu acociweyo kwitanki lamanzi ashushu, ngaloo ndlela kugcina amandla obushushu.
Xa inkqubo igqityiwe, isiginali yealam iya kukhutshwa. Vula umnyango kwaye ukothule, emva koko ulungiselele ibhetshi elandelayo.
Ukufana kokuhanjiswa kweqondo lobushushu kwinqanawa yi-± 0.5 ℃, kwaye uxinzelelo lulawulwa kwi-0.05 Bar.
Ibhotile yeplastiki isitya / indebe
Ubungakanani obukhulu beephakheji eziguqukayo Songa ukupakisha istili
Ubisi: Itoti inakho, ibhotile yeplastiki, isitya / indebe, ibhotile yeglasi / ingqayi, ukupakishwa kwengxowa eguqukayo
Ukupakisha inyama eguqukayo, iinkukhu, iisoseji
Ubungakanani obukhulu beentlanzi zokupakisha eziguqukayo, ukutya kwaselwandle
Ubungakanani obukhulu bokupakisha okulungeleyo ukutya
Egqithileyo Amacala okutshiza abuyele
Okulandelayo: Ukuqondisa kwakhona umphunga ngqo
Ukuntywila emanzini ngokuzenzekelayo
Isinyithi sokuntywila emanzini
Ukucwiliswa kwaManzi kwinzala yokubuyisela emanzini